Golaha Ammaanka ee QM ayaa fadhi ka yeelanaya qalalaasaha siyaasadeed ee Somalia… – Hagaag.com
Golaha Ammaanka ee QM ayaa fadhi ka yeelanaya qalalaasaha siyaasadeed ee Somalia…
Posted on 9 Febraayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta fadhi ka yeelanaya Qalaalasadaha Siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya, kadib markii ay dhamaatay muddo xileedka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulankan uu yahay mid albaabada loo xiranayo iyadoo go’aan laga gaarayo mowqifka ay Qaramda Midoobay ka qaadanayso arrimaha dalka Soomaaliya.
Boqortooyada Ingiriiska oo kamid ah 5-ta Dowladood ee Joogtada ah ayaa codsatay fadhigan uu maanta yeelanayo Golaha Ammaanka.
Waxyaabaha keenay kulankaan degdeg ah ayaa lagu sheegay in xubnaha Mucaaradka ay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tilmaameen in uusan sameyn hagis ama jiheyn siyaasadeed oo dhanka Doorashooyinka ah iyada oo muddo xileedkiisu dhammaaday.
Warbaahin kala duwan ayaa daabacday in fadhigaan lagu dejinayo qorshe siyaasadeed lagu caddeynayo jiheynta xaaladda Soomaaliya si looga fogaado qalalaase & muranka oo kasii dheeraada meesha uu haatan joogo.
“Qaramada Midoobay waxa ay weli u aragtaa in ay kulmi karaan hoggaamiyaasha Soomaalida oo ay u heelan yihiin dhowrista nidaamka, waxa ay si adag uga wada shaqeeyeen dhisidda hay’adaha dastuuriga ah” Sidaasi waxaa yiri Stephane Dujarric oo ah Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay.
“Wadahadalka dhammaan dhinacyada arrintaan khuseyso waa lama huraan waana in la helo heshiis cad oo ballaaran oo ku saabsan halka loo socdo iyo dhabbaha loo marayo, London ayaa qorsheysay kalfadhi looga doodayo amniga iyo Xasiloonida Soomaaliya oo ku taariikheysan 22-ka Febaraayo kahor inta aan la cusbooneysiin Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo ku beegan 28-ka Febaraayoo 2021” ayuu sii raaciyay Dujarric.
Dowlada Federalka ayaa ku adkeysanaysa inay xilka sii hayn doonto illaa laga dooranayo xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha dalka.